सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ! दर्ता नभएका व्यवसायले कमाउँछन् सवा दुई खर्ब -
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ! दर्ता नभएका व्यवसायले कमाउँछन् सवा दुई खर्ब
काठमाडौँ । का’नुनी रूपमा दर्ता नभए पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायले वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणना २०७४ को प्रतिवेदनअनुसार त्यस्ता व्यवसायले दुई खर्ब ३३ अर्ब १५ करोड रुपियाँको आम्दानी गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै यी व्यवसायको वार्षिक खर्च एक खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपियाँ रहेको र नाफा करिब ७२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभागका अनुसार गणनाको क्रममा देशभर चार लाख ५८ हजार ८५७ त्यस्ता व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता प्रतिव्यवसायको आम्दानी औसतमा ५० करोड ८० लाख रुपियाँ छ।
दर्ता नभई सञ्चालनमा रहनेमा थोक तथा खुद्रा पसलको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ। प्रतिवेदनअनुसार देशभर दुई लाख ७८ हजार ४५२ थोक तथा खुद्रा पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा छन्, जसको आम्दानी वार्षिक ८८ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
को’रोना सं’क्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछी, जनस्वास्थ्य सं’कटकाल…
सर्वसाधारणको जनजीवन क’ष्टक’र बन्दै गएपछी अब लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकार
लकडाउनकै बीचमामा सरकारले लगायो क’रको ड’ण्डा, नतिरेमा ब्याज र यस्तो…
दशगजा क्षेत्रमा अति वि’पन्न मुसहरहरुको घर निर्माणमा भारतीय एसएसबीको अ’वरोध
अब नेपालमा को’रोना भा’इरस नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन
फेरि आयो अर्को ड’रलाग्दो चक्रवात : नेपालमा आगामी २२ देखि २४ जेठसम्म वर्षा हुने…